Home » News » Densitron si ay u soo bandhigaan UReady 2U soo bandhigida Inter BEE 2019
Densitron si ay u soo bandhigaan UReady 2U soo bandhigida Inter BEE 2019
Kent, UK, 8 Oktoobar 2019 - Densitron, abuuraha tikniyoolajiyadda HMI, Broadcast xalka caqliga leh ee muujinta, iyo hogaamiye caalami ah oo kujira soo bandhigida, kormeerida, iyo xallinta xalalka kombiyuutarka, maanta waxay ku dhawaaqday inay soo bandhigi doonto qaybta 'UReady 2U' oo dusha sare ee muuqaalka kore ah oo loogu talagay codsiyada warfaafinta ee Hall 4, Stand 4414, at Inter BEE 2019 wuxuu ka dhacayaa xarunta shirweynaha Makuhari Messe ee Chiba, oo u dhaw Tokyo, laga bilaabo 13-15 November.
'UReady 2U' waxaa loo adeegsan karaa calaamadaha iyo kormeerka sawirka; sida nidaam xakameyn leh oo leh karti fara badan taabashada taabanaysa (PCT), ama labadaba. Faa'iidadu waa in marka loo eego 16.3 ”jaantus, UReady wuxuu awood u siinayaa sawirro badan oo fiidiyoow ah iyo heerar maqal ah in dhinac loo soo bandhigo.
Awooda Densitron's Aurora SBX ™, oo ah guddi gole ka kooban oo iskuxiran, Muuqaalka '' 16.3 '' ayaa sidoo kale soo bandhigaya hal sadar oo ah dhaqdhaqaaqa firfircoon ee firfircoon ee in kasta oo dalwaddii, 'dareento' farsamo ahaan taako ahaan iyadoo la adeegsanaayo awooda tikniyoolajiyadda hawada ee ay adeegsatay shirkadda Densitron. warshadaha. Cabbirro dheeraad ah oo muujinaya min 6.6 ”ilaa 28.5 ″ ayaa la soo bandhigi doonaa, midkastoo bixiya guryo fududahay iyo isku xirnaansho-ku-ciyaar.
Densitron waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa bandhigyo macluumaad firfircoon oo ka socda IDS-ta dhowaan la helay, taas oo ay u sii dheer tahay ballaarinta gaaritaanka awoodda is-dhexgalka mashiinka bini-aadamka ee Hens (HMI), taasoo u oggolaanaysa shirkadda inay soo bandhigaan oo ay soo bandhigaan macluumaadka farshaxanka casriga ah iyo xallinta xalka loogu talagalay baahinta ballaaran ee baahinta, iyo kuwa kale, dalabyada.
Agaasimaha Densitron Global Product Director Martyn Gates ayaa yidhi, "Inter BEE waa xafladda ugu wanaagsan ee gobolka, oo keenaysa hal-abuurnimadii ugu dambeysay ee la xiriirta geeddi-socodka soo-saarista, gaarsiinta iyo khibradda tusmooyinka ka hooseeya saqafka si wax looga qabto baahiyaha xirfadleyda guud ahaan Japan, iyo kuwa caalamiga ah."
Densitron ayaa sidoo kale soo bandhigi doonta natiijooyinka isbahaysiga farsamada ee khabiirada maqalka, Calrec, adoo ku soo bandhigaya IDS oo leh Calrec's Brio12, 48-input, 12-fader audio-console audio-console audio, oo ay kujirto muuqaal la mid ah kan awooda leh oo loo dejiyay sida walaalkiis ka weyn, Brio36.
Madaxa Horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah ee Densitron IDS Reuben noocan oo kale ah, "Calrec's Brio kala duwan waa midka ugu awooda badan uguna adag kombuyuutar maqalka dhijitaalka ah fasalkiisa. Waxaan sugeynaa Inter Bee inay muujiso is dhexgalka bilaa sinnaanta ah ee udhaxeysa IDS iyo khaa'inada Calrec.
“Iyada oo la adeegsanayo istiraatiijiyad ay leedahay Calrec ee nidaamka maareynta xakameynta hantida inta lagu gudajiray bandhigga, IDS waxay si toos ah uga jawaabi doontaa amarrada tooska ah ee ka imanaya qalabka 'Brio12', kaas oo iftiimin doona dabeecadda dareenka leh ee IDS oo bixin doonta tusaale dhab ah oo adduunka ah sida IDS ay uga soo saari karto macluumaadka farsamo ee shabakadda baahinta. oo ay soo bandhigaan macluumaadka xasaasiga ah isla markiiba xarunta istuudiyaha. ”
Ku saabsan Densitron
Densitron waxaa ka soo shaqeeyay khabiir soo bandhigaya oo soo saaraya qalab wax ku ool ah ee HMI (Machine Machine Interaction) oo loogu talagalay baahida macaamiisha aduunka oo idil. 45, Densitron waxay soo iibsatay Nidaamka Muuqaalka Muuqaalka (IDS) iyo calaamad ka timid IPE Technologies. IDS waxaa si isdabajoog ah loogu dhejiyaa densitron's maaraynta kantaroolka waxana uu bixiyaa bandhig buuxa oo la isku halleyn karo, shabakad ku salaysan iyo habka xakamaynta, taas oo ah isku xirnaan macquul ah oo aan dhammays tirnayn ee Densitron ee noocyada badeecadaha jira. Waxaan la shaqeynaa macaamiisheena si aan u fahanno shuruudaha gaarka ah ka dibna aan abuurno alaabta la iibiyay si wax looga qabto. Bishii Nofeembar 2019 Densitron waxaa soo iibsaday Quixant plc kaas oo naqshadeynaya iyo soo saaraya xalka ugu fiican ee xisaabinta macaamiisha iyo kormeerida guud ahaan warshadaha ciyaaraha adduunka. Wadajir ahaan, Shirkaddu waxay xafiisyo ku leedahay Asia, Europe iyo Waqooyiga Ameerika iyo injineerada codsiyada ee ku saleysan adduunka oo dhan, habkeena caalamiga ah ee naqshadeynta waxaa mar walba lagu qiimeeyaa aqoon guud oo degaanka iyo fahamka shuruudaha dhaqanka. Waxyaabaheena waxaa laga heli karaa qaybo ballaaran oo ay ka mid yihiin faafinta, caafimaadka, amniga, baabuurta, calaamadaha dhijitaalka iyo ciyaaraha. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.densitron.com.
La xiriir xiriirka:
Iyadoo si wadajir ah u leh khibradaha sannadka 40 ee ka shaqeeya Xiriirka Dadwaynaha, Page Melia PR ma aha oo kaliya hay'ad kale oo PR.
Halkan, kooxdayada u qalanta, xogwareysiga iyo dabiiciga ah ee jecel inay eegto waxyaabo si kala duwan si loo hubiyo in codadkeena macaamiisha la maqlo. Waxaannu kufaraxsan nahay sida farriintaada loo wadaagayo.
Iyadoo loo marayo habab wax ku ool ah ee istiraatiijiyadaha suuq-geynta iyo PR waxa aan luminahay 'PR' oo faaruq ah oo si toos ah uga dhaadhiciya wadnaha arrimaha, diiradda saaraya dhiirigelinta maqaallada hogaaminta fikirka, kiisaska daraasadda iyo qoraallada blogga.
Ma ahan oo keliya inaan ka wada shaqeyno hoggaamiyeyaasha, saameynta iyo go'aan qaadayaasha si loo muujiyo arrimaha saameynaya iyo is-beddelidda warshadeena, sidoo kale waxaan leenahay xiriir xooggan saxafiyiinta, tifaftireyaasha iyo daabacaadyada si ay u abuuraan macaamiishu inay rabaan inay ka hadlaan - iyo akhristayaashu waxay doonayaan inay wax akhriyaan.
Bogga ugu dambeeyay ee bogga Melia PR (arki dhan)
Scale Logic wuxuu ku dhawaaqay iskaashi rasmi ah oo lala yeesho Polar Graphics-ka fadhigiisu yahay UK si loo maareeyo howlaha iibka ee Yurub - January 16, 2020
Rakibaadda iftiinka ah waxay ku qaadataa alaabada Mediaproxy ee gudaha Finland - January 7, 2020
Sharaxaadda 'Polar Graphics' waxay taagan tahay ISE 2020 - December 11, 2019
Aurora SBX Broadcast Engineer Broadcast Engineering Calrec Brio12 Control System Densitron Graham Chapman Prmoted toEditor AQOONSIGA dhexgalka Inter BEE isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka UReady Soo-bandhigida 'UReady 2U' Video Engineer	2019-10-08
Previous: Deluxe Toronto's Joanne Rourke Waxay Caawisaa Dhageystayaasha Maqalka "Goobaha Tall Grass"
Next: NAB Show New York: Broadcast Pix Solutions Simplify Production